Iimephu zikaGoogle, ezinemigca yokuhamba-eGeofumadas
Ikhaya/Iiphotography/I-Google Maps, kunye nemigca yokujika
IiphotographyGoogle umhlaba / imephuTopography
I-Google Maps idibanise inketho ebalulekileyo kwimbonakalo yebalazwe, equka imizila yecala ukusuka kwinqanaba elithile lokulonda.
Oku kwenziwa kwiphaneli yasekhohlo "Uncedo" kwaye kwiqhosha elidadayo ungavula okanye uvale umbono weegophe.
Umthombo walo mgca wokudibanisa uGoogle udityanisiweyo yimodeli yendawo yedijithali eqale yaphuhliswa yi-NASA kwaye yaqhubeka yi-USGS, eyaziwa ngokuba yi-SRTM-90m. Lo msebenzi ubonakala kwiimephu zikaGoogle, kwiGoogle Earth kwinqanaba lemodeli yedijithali. Isisombululo esithe tyaba ziimitha ezingama-90 (siyahluka kububanzi) kwaye ngokusekwe kule curve ezinye zadityaniswa (Kucingelwa ukuba e-United States kuhamba iimitha ezingama-30 kodwa akunakusinceda kuthi). Impazamo ethe nkqo iqikelelwa kwiimitha ezili-16.
Ukukhutshelwa kwalo mgca kunokwenziwa kwi-AutoCAD, ukufumana amaphupha avela kwigridi kunye nokuvelisa imodeli yomhlaba kunye nemigangatho yayo.
Ibhulogi enkulu ithatha umhlalaphantsi
UPietro Nicola GREGORACE uthi:
Come otterrò le umfanekiso?
Molweni kuhle…. Ndingathanda ukwazi ukuba isiseko se "topographic" esisetyenziswe ngugoogle emhlabeni ukubonisa iimbono ze-3D kunye nokwenza iiprofayili zomhlaba yimodeli ye-SRTM 90m okanye isebenzisa ubuchule be-photogrammetric ukwenza imodeli ye-3D ???
USamuel M. Corrêa uthi:
Sou engheiro eletricista e faço inventários de rios kunye ne-bacias kunye neeprojekthi eziphambili zezityalo zamanzi. I-Gostaria yokwazi oku ngakumbi malunga nokubekwa kweengcingo zamaphu kumaphu. Kuya kuba ngu na na roda.
Kukho iinkqubo ezahlukeneyo zokuzikhuphela. I-ArcGIS inokwandiswa, njengoko unako ukwenza nge-AutoCAD usebenzisa Plex.earth
Imodeli yedijithali yi-SRTM yehlabathi. Ukusetyenziswa kwezi curve kunye neziphakamiso kunokuba luncedo kwizifundo zemimandla emikhulu, kuba kulula kakhulu. Ayikusebenza ngokuqinisekisileyo malunga novavanyo lweengingqi. Ukungqiniswanga kwiindawo eziphakamileyo kunokuhamba ngeendlela ezahlukeneyo ze-+/- 20 metres.
Arturo Cardona uthi:
Ndiyakuvuyela umsebenzi ogqwesileyo owenziwe:
Amanqanaba emitha nganye imitha engayifumana kwi-Google Eearth, kunye nesofthiwe efana ne-autocad 3d, yintoni inqanaba lakho lobulungisa?
Oku ngasentla kuyimfuneko kuba kufuneka ndibhekise kwisikali.
Adrián Giménez uthi:
Le mizila yenkalo ingalayishwa kwiimephu zeGPS kwaye zilandele kumhlaba ukuze uzikhulule ??? Ndiyabonga
Maria Cedars uthi:
Ndingathanda ukwazi izibonakaliso zendlela yokubeka imizila yeembambano kwiindawo ezahlukeneyo
Ndingathanda ukwazi indlela yokujonga imida yecolon kwindawo yesebe yaseLavalleja Uruguay
Stuart Perez uthi:
Ngomhla, ndifuna ukwazi ukuba ndingayifumana njani imifanekiso ye-Jalapa Guatemala
Sawubona Ndingayongeza njani le nkonzo? Kwaye nesisombululo esiphezulu kwiifoto ze-satellite. Ndiyabonga
Filiberto Salvatierra uthi:
Ndicinga ukuba umsebenzi ophuhliswe nguwe unomdla kakhulu, ukuba unako ukundixelela malunga nokukhululwa kwaloo nto kuba ndiyi-agronomist kunye nolwazi lobuchwepheshe kumafama kwindawo abasebenza ngayo isebe laseJalapa, eGuatemala